China sakan'ny 900mm 1130mm upvc plastika firakotra firakotra mpanamboatra sy mpamatsy | Jiaxing
Karazana vokatra: Takelaka an-tampon'ny UPVC
endrika: Onja mihetsika
Layer Type: Single Layer; Seza 3, 4Layer
Color: Green.White, Blue, Yellow, Gray (Customed)
Ambainy: 720mm, 930mm, 1130mm, 1350mm
Halavany: Araka ny fanontanian'ny mpanjifa (Normal max 12meter)
hateviny: Amin'ny ankapobeny 0.8mm-3.0mm
Fampiharana: Zavamaniry avo lenta, zavamaniry vy, trano fanatobiana entana, tsenan'ny tantsaha sy fiara fitaterana sns.
1. Amin'ny maha matihanina indrindra amin'ny famokarana orinasa mpanao tafo, XINGFA dia manangona vola 8 tapitrisa dolara hananganana orinasa 20000 metatra toradroa sy ivontoerana marketing any TianJin.
2. tsipika poduction 16 sy fitaovana mandroso an'ny taila vita amin'ny vy vita amin'ny tafo vita amin'ny vato sy ny rafitry ny tatatra PVC.
3. Vokatra fitaovana vita avy any Frantsa ary noforonin'ireo mpamorona endrika ambony avy any Canada! Ny vokatra tafo rehetra dia avo lenta amin'ny maha Nouvelle Zélande sy Korea! Ka ny vato JIAXING dia mifangaro vy mitafo amin'ny tafo tanimanga 35-50 taona sy ny androm-piainana rehetra! Aza miala loko mihitsy!
4. JIAXING dia manome vokatra namboarina mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa.
5. JIAXING dia miantoka ny vidiny tsara indrindra, ny kalitao ary ny fahafaham-po ho an'ny mpanjifa.
6. JIAXING Roof's Roof vita amin'ny vato vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy dia misy sosona sivy eo ambonin'ny faladiany vy vy. Manome toky ny faharetan'ny vokatra izahay. Ny takelaka tafo tsara indrindra ihany no hataonay izay hanatsara ny tontolo iainantsika.
Toy ny fananganana canopy, patio, indostrian'ny sakafo sy fanafody, hopitaly, sekoly sy trano heva indostrialy, be mpampiasa amin'ny trano fonenana, villa, atrikasa, trano fanatobiana entana, trano fanaovan-trano, trano fandraisam-bahiny, trano finday, rindrina fanamafisam-peo ary boaty dokam-barotra sns. ny mpamatsy ara-dalàna ny taila fanaovana tafo ho an'ny tetik'asa goavambe marobe any Shina, ary koa ny Afovoany Atsinanana, Amerika atsimo sns.
1. Rafitra fanaraha-maso kalitao matihanina sy fanaterana ara-potoana,
2. Manome torolàlana ara-teknika amin'ny fametrahana.
3. OEM & ODM, manome serivisy namboarina ihany koa.
4. Nahazo mari-pahaizana tamin'ny SGS / ISO9001 / CE
5. Manomeza torohevitra matihanina amin'ny famolavolana injeniera anao.
6.We dia hanafina tsiambaratelo momba ny faritra fivarotana mpanjifa, hevitra momba ny famolavolana ary ny mombamomba anao manokana rehetra.
Vokatra mifandraika (Profile momba ny tafo UPVC rehetra)
dia naorina tamin'ny 1998 ary mpanamboatra mpamokatra plastika (PVC / FRP / PC) tafo sy rindrina any Shina. Rehefa afaka 10 taona fampandrosoana, ny orinasanay dia manana fahafaha-mamokatra isan-taona manodidina ny 6 tapitrisa metatra toradroa,Mandray an-tanana ny mpanjifa vaovao sy taloha izahay amin'ny fifampiraharahana, fifampiresahana ary fampandrosoana miaraka!
Previous: Pc Twin-Wall Transparent 8Mm Polycarbonate Hollow Sheet
Manaraka: tafo ambony pvc tafo plastika tafo 1070 tafo plastika sakany
UV fiarovana plastika tafo resina taila plastika ...
tafo mitafo tafo mitafo tafo pvc taila taila
Plastika mitafo vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika UPVC APVC
Takelaka tafo mitafo Upvc
mavesatra mavesatra upvc tafo taratasy mitafo plastika ...